1. Kulezi zinsuku, ukubukeka kobuso Noma ubuso be-V-chef Ukuthi noma ngabe ubheka kanjani, kubukeka kuthambekele kulesi sikhathi Thatha izithombe ezinhle njengePangpuri Njenge-superstar Kuyiphupho lentsha Abantu abaningi babhekene nenkinga yokuvuvukala kobuso. Eyaziwa nangokuthi "ubuso obukhulu" obudale ukukhathazeka Noma abanye abantu benziwa inhlekisa ukuze bangabe besazethemba ngokuthatha izithombe noma ngokuphila Namuhla sinezeluleko ezinhle zokukusiza ukuthi uthole ubuso obuhle nokuthi unganciphisa kanjani isisindo sobuso esiqinisekisa ukuthi noma ngubani angakwenza ngaphandle kobunzima.
2. Vivinya imisipha yobuso njalo, izivivinyo ezilula ezingenza emini. Noma ngaphambi kokulala ngesikhathi sokudinga ukuphumula Kubalulekile njengendlela yokwehlisa isisindo sobuso. Ungakwenza wedwa. Kunezinyathelo ezilula:
3. Qala ngokubeka izintende ngobumnene kuwo womabili amathempeli. Bese uqinisa amazinyo ngokuqinile ukuze wenze umhlathi ushube. Cindezela intende yesandla sakho ukushintshanisa ithempeli libe ukunyakaza okuyisiyingi 3 kancane futhi ngokunethezeka ukuzwa imisipha ikhululekile.
4. Qhubeka ngesimo sesibili Qala ngokubeka inkomba, imaphakathi kanye neminwe yokukhalisa ngobumnene ezinhlangothini zombili zamathambo ethu. Bese umomotheka ngobumnene, cindezela ngobumnene yonke iminwe emithathu esihlathini, bamba imizuzwana emi-5, bese uphinda amanye ama-10.
5. Ake siqhubeke endaweni yesithathu. Mboza umlomo ngesandla esivelele Bese wenza izihlathi zikhukhumele Bese uhambisa umoya emlonyeni esihlathini sobunxele. Iya esihlathini sokunene, wenze ukujika okuyishumi, uziphumulele.
6. Isikhundla sokugcina ukumunca zombili izihlathi emlonyeni wakho bese ubamba umlomo wakho imizuzwana 5. Uma isikhathi sesiphelile, sineka ngenkathi ubambe umlomo wakho nangemizuzwana emi-3. Ingabe u-10 uphendukela emuva naphambili endaweni ngayinye ngaphezu kokulula ukuyenza. Futhi ngaphandle kwemishini enzima Uma kwenziwa njalo Futhi kusiza ukunciphisa amafutha ebusweni Nciphisa ubuso obunamafutha, uguqule ube yimisipha, ulolonge ngokulingana ngendlela elula.Kubalulekile, ungakhohlwa ukukwenza ngokuhlangana nokuzivocavoca umzimba nsuku zonke.
7. Phuza amanzi amaningi Anele ukuhlangabezana nezidingo zomzimba, amanzi abalulekile njengendlela yokwehlisa isisindo sobuso. Ngoba kudala ukusha Siza uhlelo lokugaya ukudla Futhi gcina amaseli ezitho zonke zomzimba ehlanzekile futhi asebenze ngokujwayelekile Abantu abaningi abakuqondi kahle lokho Ukuphuza amanzi amaningi Kungadala i-edema yobuso nomzimba Okungukuthi empeleni Ukuphuza izingilazi eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili zamanzi ahlanzekile ngosuku, ikakhulukazi ngaphambi kokudla ngesandla. Phakamisa ingilazi egcwele yamanzi okuphuza Ngaphezu kokukusiza wehlise isisindo Ukuqabula umzimba Yidla ukudla okuncane Kuphinda kuthinte nokusha komzimba
8. Yehlisa ukuphuza kwakho iziphuzo ezibandayo neziphuzo ezidakayo. Olayini beqembu kudingeka bahlele kabusha izimpilo zabo Ufuna ukuba nobuso obuhle ngokulingana Ngoba utshwala buyehlisa umzimba emzimbeni Futhi kubangele ukuvuvukala kobuso Kuze kube yilapho isikhumba singakhanyi, phuza kancane, kodwa jabulela umoya. Ngoba impilo enhle iyabanda
9. Nakekela ukudla uphumule. Ngaphezu kwakho konke ngaphandle kwezindlela zokuncipha kobuso Ukukhetha ukudla okuqukethe i-fiber Futhi amaprotheni amahle abalulekile. Faka amavithamini avela kwizithelo ezinempilo njengama-apula, ugwava noma izithelo zesitrus ezinoshukela omncane. Kubalulekile ukuphumula ngokwanele. Kuhle esikhunjeni nasempilweni yakho. Futhi phila ngokuqonda komhlaba Hlala uzifaka umfutho omuhle. Akunzima kangako, vele ugxile futhi unake ngempilo yakho. Zama ukuletha izindlela ezilula zokwehlisa isisindo sobuso esizincomayo ukuba sizibone. Okokuba nobuso obukhanyayo nebala